Duulimaadkii diyaaradaha Dubai ee Bosaso oo loo wareejiyay Garowe (dhegayso) – Radio Daljir
Duulimaadkii diyaaradaha Dubai ee Bosaso oo loo wareejiyay Garowe (dhegayso)
Maarso 17, 2019 10:12 b 0
Wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland ayaa ku dhawaaqday duulimaadyadii diyaaradaha Dubai ee ay ku tagi jireen garroonka diyaaradaha ee magaalada Bosaso loo wareejiyay garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugatoor ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Garoowe, kadib go’aan kasoo baxay wasaaradda, waxaana uu kaga dhawaaqay munaasabad maalinimadii shalay kadhacday Garoowe oo xariga looga jarayay kaydka shidaalka diyaaradaha ee garoonka Gen. Maxamed Abshir.
Wasiir Lugatoor ayaa intaasi ku daray in hadda wada hadal uu socdo oo duulimaadka Bosaso looga wareejinayo diyaaradaha xamuulka qaada.
Muxuu yahay saamaynta garroonka Bosaso uu ku yeelan karo wareejintii duulimaadkii Garoowe?
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Sidee wax looga qaban karaa Abaaraha soo noq noqda (dhegayso)